Gaari ay dad safara saarnaayeen oo lagu rasaaseeyay Hiiraan | KEYDMEDIA ONLINE
Gaari ay dad safara saarnaayeen oo lagu rasaaseeyay Hiiraan
Gaari ay saarnaayeen dad safara oo ka baxay magaalada Muqdisho kuna sii jeeday caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ee Dhuusamareeb ayaa lagu rasaaseeyay gobolka Hiiraan.
GURICEEL, Soomaaliya - Sida ay noo xaqiijiyeen dad goobjooge yaal ah degmada maxaas ee Gobolka Hiiraan ayaa kooxo hubeesani waxay ay rasaas sababtay khasaaro kala duwan ay huwiyeen gaari nuuca leylada ah oo siday dad safar u ahaa magalaada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug kana baxay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.
Gaariga ayaa marayey agagaarka degmada Maxaas ee Gobolka Hiiraan, waxaana Goobjoogayaashu ay sheegeen gaariga la rasaaseeyay ay saarnaayeen rag, dumar iyo caruur ku safrayay waddada. Goobjoogayaashu waxay sheegeen in 5 qof oo kamid ahaa rakaabkii gaariga ay ku dhawacmeen, kuwaas oo haatan dhawacoda la geeyay isbtaalka magaalada Guriceel.
Arintaan ayaa la sheegay in ay salku ku heyso aano qabiil oo udhaxeeya dadka dega gobollada Hiiraan iyo Galgaduud, waxaana horay ay isugu geysteen dhibaatooyin dil, dhac iyo af-duub isugu jira, kuwaasoo aan weli si rasmi ah xal looga gaarin.